Isitudiyo esimnandi kumbindi wesixeko - I-Airbnb
Isitudiyo esimnandi kumbindi wesixeko
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguApartmaji
Sinamagumbi ama-2 afanayo axhotyiswe ngokufudumeleyo abekwe kumgangatho wokuqala okanye wesibini wendlu. Igumbi lokuhlala elinombhede ophindwe kabini kumlinganiselo we-180x200 cm, itafile yesidlo esinezitulo, ikhitshi encinci, exhotyiswe nge-dishwasher, iTV, uxhumano lwe-Intanethi olungenazintambo, igumbi lokuhlambela kunye ne-anteroom ene-wardrobe.
Ungasebenzisa kwakhona igumbi elihlangeneyo elikhulu lemisebenzi emininzi kwindawo esezantsi yendlu okanye i-sauna yabucala kwintlawulo eyongezelelweyo ye-10 ye-Eur ngomntu.
Onke amagumbi ethu kunye namagumbi abekwe kumbindi weKranjska Gora kwindawo ethe ngqo ye-ski resort Unikezelo olongezelelweyo kunye nezibonelelo ziqinisekisa ukubakho kwekhefu elisebenzayo kuwo onke amaxesha onyaka. Ukwaneliseka kweendwendwe zethu ezithanda ukubuya kubaluleke kakhulu kuthi.
Eyona nto siyibona ibalulekile kukuba ngaphandle kwendawo yokulala sinokukunika yonke enye into oyifunayo ngekhefu elimnandi: unokuqesha zonke izixhobo zokutyibiliza, uzilungiselele; ngesicelo sakho sinokubhukisha iikhosi ezahlukeneyo zamaqela kunye nezifundo zomntu ngamnye kwisikolo sethu sokutyibilika se-Intersport Bernik kuwe ngezaphulelo ezikhethekileyo 10-20%, kunye nokulungiselela uhambo kunye neengokuhlwa zokonwabisa. Sikwalungiselela izithuthi eziya kutsho kubantu abathandathu.
UMNIKELO OWODWA LWETHU LWETHU LWETHU:
Iindawo zokupaka kunye negaraji,
Ngokuchasene nentlawulo eyongezelelweyo, sinikezela ngezithuthi eziya kutsho kubantu abasi-8 - ivan ye-Wolksvagen Transporter.
Ukugcinwa kwasimahla kwezixhobo zakho kwiwadi yethu - irenti kwindawo yokutyibiliza ekhephini ngqo kufutshane neDolenčev Rut ski lift-Intersport Bernik ivenkile yokurenta.
Isipho sasebusika siquka izaphulelo ezongezelelweyo kwirenti yethu yezixhobo zokutyibiliza: irenti yezixhobo zokutyibiliza kunye nenkonzo - 20% nakwisikolo semidlalo yasebusika: - iikhosi zeqela, i-kindergarten - 20%, izifundo zomntu ngamnye - 10%.
Renta ibhayisekile kwindawo yethu yokurenta - 20%
Ukunikezelwa kwehlobo lemisebenzi ekhokelwayo yeendwendwe zethu ngezaphulelo ezikhethekileyo.
Simamele kwaye sazama ukwenza amagumbi amnandi, afudumeleyo, apho unokulahla nje umthwalo wakho kwaye uphefumle...
Onke amagumbi ethu kunye namagumbi abekwe kumbindi we-Kranjska Gora kwindawo ethe ngqo ye-ski resort, kwaye anombono omangalisayo phezu kweentaba. Amagumbi e-Smučišče (i-Ski resort) - njengoko kubonakala kwigama - abekwe ngokuthe ngqo kwindawo yokutyibiliza ekhephini ecaleni kwe-Dolenčev Rut ski lift. Unikezelo olongezelelweyo kunye neenzuzo ziqinisekisa ukuba nokwenzeka kwekhefu elisebenzayo kuwo onke amaxesha onyaka. Ukwaneliseka kweendwendwe zethu ezithanda ukubuya kubaluleke kakhulu kuthi.
Umbuki zindwendwe ngu- Apartmaji
Ukuba unombuzo ngexesha lokuhlala kwakho, sikucela ngobubele ukuba usitsalele umnxeba.